ဘန်ကောက်မှာ ရေကြီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » South East Asia » ဘန်ကောက်မှာ ရေကြီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 17, 2011 in South East Asia | 12 comments
ဘန်ကောက် ကို ရေတွေ ၀င်လာပြီ
ထိုင်း နိုင်ငံမြောက် ပိုင်း တွင် ရေလွှမ်းမိုးမှု ကြောင့် ဆည်များ ဖောက်ချ ရာ ကနေ လျှံ ထွက်လာ
သည့် ရေတွေ ဟာ ဒီနေ့ မှာမြို့ တော် ဘန်ကောက် ကို ကျောက်ဖယား နဲ့အခြား နေရာ တွေ က
နေ ၀င်ရောက်လာ ပြီလို့FNG က သတင်း ရရှိ သည်။
ထိုင်း နိုင်ငံ ရဲ့မြို့ တော် ဟောင်း ဖြစ် တဲ့ အယုဒ္ဒယ မြို့ တော်ရဲ့နေရာ အချို့ပြီးခဲ့ သည့် သီတင်း
ပတ်ထဲက ရေ အောက် ရောက် ရှိ နေ ပြီး ဘန်ကောက် မြို့ထဲက ပသုပ် ဌာနီ ခရိုင် မှာ တော့
ရေလွှမ်း မိုး မှု အကြီး အကျယ်ကြုံတွေ့ နေရ သည် ဟု ပသုပ်နမ် တွင် နေ ထိုင် သည့် မြန်မာ
ကျောင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုလင်းထက် က FNG သို့ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ရေကြီး မှု ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၃၀၀ နီးပါးခန့် သေဆုံး ခဲ့ သည် ဟု ဘန်
ကောက် ပို့ စ် သတင်း စာ တွင် ဖော် ပြ ထား သည်။ ယခု ရေလွှမ်း မိုး မှု မှာ ထိုင်း နိုင်ငံ တွင်
နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း အဆိုးရွား ဆုံး ဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက် မြို့ရေကြီး ချန် နှင့် တိုက် ဆိုင် စွာ ပင် တောင် တရုတ် ပင်လယ် မှ အပူပိုင်း
မုန်တိုင်း တစ်ခု သည် ဗီယက်နမ် ကမ်း ရိုး တန်း ကို ဖြတ် ကျော် ကာ အောက်တိုဘာလ
၁၆ ရက် နေ့တွင် ကုန်း တွင်း ပိုင်း သို့ဝင် ရောက် လာ မည် ဖြစ် သည်။
အဆိုပါ မုန်း တိုင်း ကြောင့် ထိုင်း နိုင်ငံ တောင် ပိုင်း တွင် ထပ်မံ ရေကြီး နိုင် သည် ဟု
အစိုးရက သတိပေးထား သည်။
ရေကြီး နေသည့် နေရာ များ ကို ထိုင်းစစ်တပ် နှင့် အကူ အညီပေး ရေး အဖွဲ့များ က
သွား ရောက် ကယ်ဆယ် မှု များ ပြု လုပ် နေသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ် က ရေကြီး နေ သည့် နေရာ များ ကို သွားရောက် ကြည့် ရှု ပြီး
ရေနှုတ်မြောင်းများ မှ တစ်ဆင့်ပင်လယ်တွင်း သို့ရေ များ စီးထွက် သွား စေရန် စီစဉ်
ထား သည် ဟု ဆို သည်။
လော့ဘူရီ နှင့် နခွန် ဆ၀န် တွင် အစိုးရ က ရေကြီး နေ သည့် ဒေသ မှာ ပြည်သူများ ကို
ရဟတ်ယာဉ် များ စစ်ကား များ ဖြင့် ဘေးလွတ်ရာ သို့ပို့ ဆောင်ပေး ထား သည်။
နောက်ဆုံး ရရှိ သည့် သတင်းများ အရ မြို့ တော် ဘန်ကောက် နှင့် နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း
အနောက်မြောက်ပိုင်း သို့ဆက်သွယ် သည့် လမ်းများ ကို ပိတ် ထား ရသည် ဟု သတင်း
ရရှိ သည်။ အဝေးပြေး လမ်းမ များ ၏ အချို့နေရာ များ တွင် ရေ များ ဖုံး လွှမ်းနေသည်။
စတုတ္ထမြောက် ရေမြုပ်သွားတဲ့ စက်မှုဇုန်
စက်ရုံ ၉၀၊ အလုပ်သမား ၆၀,၀၀၀တို့ရဲ့ အနာဂတ် မရေမရာ ဖြစ်နေပြီ
ရေအရမ်းကြီးလို့ အယုဒ္ဓမှာရှိတဲ့ စတုတ္ထအကြီင်္းဆုံးစက်မှုဇုန် ရေမြုပ်သွားပြီး အလုပ်သမားတွေရွှေ့ပြောင်းရေး အမိန့်ပေး ဖို့ အာဏာပိုင်တွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့အလုပ်သမားတွေက ရေတားတွေထိမ်းထားဖို့ကြိုး စားပေမဲ့လည်း ရေ တွေက တံတိုင်းအကာတွေကို ချိုးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ဘန့်ဖာအင်းစက်မှုဇုန်ဟာ ရေမြုပ်သွားပါတယ်။ ဘေးကင်းရာမြေကို ချက်ချင်းရွှေ့ဖို့ ပြည်သူတွေကို အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်လို့ ဘန့်ဖာအင်းခရိုင်မှူး နာသီးဘောဆုဝမ်က ပြောပါတယ်။ ရေ အမြင့်က ၈၀ စင်တီမီတာကနေ တမီတာထိ ရောက်လာပါပြီ။
သောကြာနေ့ကတည်းက ဒီစက်မှုဇုန်ရဲ့ အရှေ့ဖက်က ကြိုးပေါက်သွားတဲ့ရေတံတိုင်းကို ပြင်ဖို့ စစ်သားတွေနဲ့အလုပ် သ မားတွေက အပြိုင်အဆိုင်လုံးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့ ရေအားကအရမ်းသန်လို့ မရပါဘူး။ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က ကျောက်ဖရား မြစ်ရေ လျှံပြီး ချိုင်ဝပ်ထနာရမ်ဘုန်း ကြီးကျောင်းမှာတားထားတဲ့ အတားတွေကို ချိုးဖျက်ပစ်လိုက်ချိန်ကစပြီး အယုဒ္ဓယနဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသတွေ ရေမြုပ် ကုန်ပါတယ်။ ဆာဟာရတ္ထနာနုခေါန်၊ ရိုကျနာနဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စက်မှုဇုန် တွေ ရေလွှမ်းကုန်ပြီး ဘတ်ငွေ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ကြိုးစားပေမဲ့လည်း ဘန်ပါအင်းဇုန် အားလုံးရေမြုပ်ကုန်တယ်လို့ ထိုင်းစက်မှုဇုန် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နာရာပေါ့တီးဝဲထနွမ်က ပြောပါတယ်။
စက်မှုဇုန် ၄ ခု စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ၁၉၄ ဘီလျံလောက် ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဘန့်ဖာအင်ဇုန်ဟာ လိုက် (ရိုင်) ပေါင်း ၁၉၆၂ လိုက်ရှိပြီး စက်ရုံပေါင်း ၉၀ နဲ့ အလုပ်သမား ၆၀,၀၀၀ ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းအများစုက အီလက် ထ ရောနစ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အင်ဂျင်နဲ့အ၀တ်အထည်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အယုဒ္ဓယကလာတဲ့ရေတွေတားဖို့ အသေအချာဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ထားဖို့ ပထုမ်ဌာနီ၊ ခလုန်လူအန်းခရိုင်းမှာရှိတဲ့ နာ ၀မ်နာခေါန်စက်မှုဇုန်ကို မနေ့က ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ဖရာယုသ်ကျန်းအိုချား စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေမှာ ရေကြီး တာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ အစိုးရရဲ့ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်မှုဌာနက တပ်မတော်ကို တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရာယုသ်က ပြောပါတယ်။ အခုအခါမှာ တပ်မတော်ဟာ နာဝမ်နာခေါန် စက်မှုဇုန် မပျက်စီးစေဖို့ ရေကြီး တာကနေ ကာကွယ်ဖို့ အဓိကထား လုပ်နေပါတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရာယုသ်က ပြောပါတယ်။ ဒီဇုန်မှာ ကုန်ထုန်စက်ရုံ ပေါင်း ၂၂၇ ရုံရှိပါတယ်၊ အကျယ်အ၀န်းက လိုက် (ရိုင်) ၈၀၀၀ ရှိပြီး အလုပ်သမားပေါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ဒီနယ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ဘတ်ဘီလျံ ၁၀၀ ကျော်ပါတယ်။
အယုဒ္ဓယ၊ ဘန့်ဇာအင်း စက်မှုဇုန် ရေမြုပ်နေပုံ
စစ်သားတွေဟာ ရေတားတံတိုင်းတွေဖို့ ဘို့ သဲအိတ် ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ကို အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်နေကြရပါတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရာယုသ်က ပြောပါတယ်။ ရေတား အကာအကွယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဇုန်နေရာက လုံခြုံစိတ်ချရပေမဲ့ အကာအကွယ်အပြင်ဖက်မှာနေတဲ့ လူတွေကတော့ ရေလွှမ်းတာ ခံနေရပါတယ်။ သောကြာညက လျှံတက်လာတဲ့ရေက အရမ်းမြင့်တယ်လို့ န၀မ်နခေါန်စက်မှုဇုန်မှူး နီဖစ်က ပြောပါတယ်။ “စနေနေ့လည်မှာ ရေတက်လာတာဆို ၅မီတာ အမြင့် ရှိတဲ့တံတိုင်းကိုရောက်ဖို့ တမီတာလောက်ပဲ လိုတော့တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ရေတွေက ဒီ အတား အဆီးတွေကို ချိုးဖျက်လိုက်ပြီး စက်မှုဇုန်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်သမားတွေက ရေတွေကို စုပ်ထုတ် ပစ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာရှအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်က ဒက်ချာတီဝေါင်တံတားအနီးက မြေတံတိုင်းကိုပြင်ဖို့ အာဏာပိုင် တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေက လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ အာရှလမ်းမကြီးကို ဒီကနေ့ဖွင့်ဖို့ မျှော်လင့်ရတယ်လို့ နခုန်ဆ၀မ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ချိုင်ရော့ခ်ျမီဒဲန်က ပြောပါတယ်။ပြည်နယ်ရေဘေးကယ်ဆယ် ရေးဌာနက ရေဘေးဒုက္ခ သည် ၁၀,၀၀၀ လောက်ကို နေစရာပေးနေရပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၁ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
တစ်ချို့ ..ရွာသားတွေမသိလောက်သေးဘူးထင်လို့ ..
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ …Upload သီးသန့်မတင်ပေးတော့ဝူးဂျာ..
ရေဘေးဒဏ်က ဘန်ကောက်မြို့ သက်သာရာရ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တော်က ကျောက်ဖယားမြစ်ရေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီး မြို့တော်မှာ ရေမကြီးအောင် ကာရံထားတဲ့ အတားအဆီးတွေကို မချိုးဖျက်ဘဲ ပြန်ကျသွားတာကြောင့် ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေ စိတ်အေး သွားရပါတယ်။
မြို့တော်ရဲ့ အချက်အခြာနေရာတလျှောက် ရေလွှမ်းမိုးမယ့်အရေး စိုးရိမ်ခဲ့ရတာတွေ သက်သာရာရသွားပြီလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြို့တော်ရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ ရေကာတံတိုင်းကျိုးပြီး ရေ၀င်တာကြောင့် အဲဒီက စက်မှုဇုံကို ရွှေ့ပြောင်း ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ရေဘေး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မကြာသေးခင်က မိုးအပြင်းအထန်ရွာတာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် မြို့တော်အတွက် အန္တရာယ်ရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ နေ့လည်ဘက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ စိုးရိမ်နေတဲ့ မြို့တော်သူမြို့တော်သား တချို့ဟာလည်း ရေကာတံတိုင်းကို ခိုင်မာအောင် သဲအိတ်တွေချပြီး ဆက်ပြီး ကာရံနေကြဆဲရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာ ရေမကြီးနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာတဲ့ထိ သဲအိတ်တွေဆက်ပြီး ချသွားမယ်လို့ ဒေသခံတချို့က ပြောကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၃၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီးပြီလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ မြို့တော်ရဲ့ မြောက်ဘက် ခရိုင်တွေက တ၀က်တပျက် ရေမြှုပ်နေတဲ့မြို့တွေမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ အစာရေစာ ပြတ်လပ်ပြီး အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြဆဲရှိပါတယ်။
Original enclosure (SchearfThaiFloodReliefVolunteers-resizedpx480q100shp8.JPG)
ဒုက္ခ ဘယ်လောက်တောင် များကြရှာမလဲ မသိဘူးနော် ကိုပေါက်ဖော်
ရေမြန်မြန်ပြန်ကြ ပြီး အားလုံး ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချမ်းသာကျန်းမာကြပါစေ လို့ 
ကွန်မင့် နဲ့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့ သ လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ဆရာလေးပေါက်ပေါက် ဓတ်ပုံများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း(လေးစားလျှက်)
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက် ရောက်၊ကျုပ်အတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံး
ကျုပ်က လေးပုံမြောက်က ချာတိတ်လေးလေ။
အလုပ်သမားတွေ ပိုဆိုးမယ် ထင်တယ်
ရေကျတာတောင် ချက်ချင် ပြန်စနိုင်မယ်မထင်ဘူး
mp3 အသံဖိုင်ကို ဂဇက်မှာတင်ချင်ရင် ဘယ်လိုတင်ရသလဲဆိုတာလေး
သင်ပြပေးပါရန် လေးစားစွာ မြစ်တာ ရပ်ခံအပ်ပါတယ် ဆရာပေါက်ဖေါ်ခင်ဗျား။
Upload တင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ် လင့်ခ် ပြန်ပေးမှရမယ်ဗျ
Web Page မှာ..တိုက်ရိုက်နားထောင်စေချင်တာဆို.လျင်တော့ မရလောက်ဘူးထင်တာပဲ..
Upload တင်ပြီး Download Link ပြန်ပေးချင်ရင်တော့..
ပြီးရင် Select File ကိုရွေးပြီး ကွန်ပျူတာထဲက Mp3 ကိုရွေးပြီး Open လုပ်ရင်..သူ့ ဘာသာ
File URL ဘေးမှာ ဒေါင်းလုဒ်အတွက် လင့်ခ် လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
ကျနော်စမ်းတင်ကြည့်တဲ့ MP3 ဆို.ဒီမှာ
တခြားကနေ Upload တင်ချင်ရင်တော့..
http://mp3songurls.com/ ကနေသွားပြီး Browse ကနေ mp3 ဖိုင်ကိုရွေးပြီး
Start Mp3 Upload ကိုနှိပ်လိုက်ရင်..တင်နေပါလိမ့်မယ်
ပြီးရင် အောက်နားမှာ လင့်ခ် ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဗျ
Forum ထဲမှာ တင်ရင်တော့ တိုက်ရိုက် နားထောင်လို့ ရမလားမသိပါဘူး..
css code တွေဘာတွေနဲ့ မိုလို့ .ကျနော်လဲနားမလည်သေးလို့ 
ဘန်ကောက်မှာ ရေဒီလောက်ကြီးနေတာတောင် ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ … ဟိုပစ္စည်းတွေ ၊ ဒီပစ္စည်းတွေ နဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ ပေါလောပေါ်မနေတာ … သူတို့အတော် စည်းကမ်းရှိလို့ပါပဲ … ။
ဒီမှာတော့.. မြောင်းလေးပဲ ရေလျှံဦးတော့ …. (ဖြည့်တွေးကြပါကုန် ….. )
အော် ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ့နော် သတ္တဝါအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
ကြားရ နားဝ မှာ မသက်ပါ့လား ကိုပေါက်ဖော် …. ဒါနဲ့ အောက်ဆုံးပုံက အဘိုးကြီးက ဘာလုပ်ပြနေတာလဲ… ကနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး…….